The Sele School – Kava
mon29aug7:30 pm8:30 pmZumba with JoFun zumba sessions for adults and teenagers alike. Please contact beforehand as sessions are likely to be fully booked.7:30 pm - 8:30 pm Price:£6 per session
mon05sep7:30 pm8:30 pmZumba with JoFun zumba sessions for adults and teenagers alike. Please contact beforehand as sessions are likely to be fully booked.7:30 pm - 8:30 pm Price:£6 per session
mon12sep7:30 pm8:30 pmZumba with JoFun zumba sessions for adults and teenagers alike. Please contact beforehand as sessions are likely to be fully booked.7:30 pm - 8:30 pm Price:£6 per session
mon19sep7:30 pm8:30 pmZumba with JoFun zumba sessions for adults and teenagers alike. Please contact beforehand as sessions are likely to be fully booked.7:30 pm - 8:30 pm Price:£6 per session
mon26sep7:30 pm8:30 pmZumba with JoFun zumba sessions for adults and teenagers alike. Please contact beforehand as sessions are likely to be fully booked.7:30 pm - 8:30 pm Price:£6 per session